ओमकार टाइम्स `अब ओलीबाट मुक्त गराउन आन्दोलन गर्न नपरोस्´- देउवा – OMKARTIMES
`अब ओलीबाट मुक्त गराउन आन्दोलन गर्न नपरोस्´- देउवा
काठमाडौं। आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि पूर्ण रुपमा खनिएका छन् । आज काठमाडौंमा ११ विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले करदेखि सरकारी हस्तक्षेपसम्मका प्रसंग कोट्याए ।
उनले भने, “एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जादा पनि कर लगाइएको छ । हस्ति काभ्रे जिल्ला गएको थिए । त्यहाँ त कुखुरा पनि एक ठाउँबाट अन्त लैजाँदा पनि कर लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम केपी शर्मा ओली हैन कि करप्रसाद ओली राख्दिनुपर्छ ।”
शान्ति सुरक्षा निकै कमजोर भएको चर्चा गर्दै उनले भने, “विप्लवले हत्याहिंसा छोड्नुपर्छ सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ दुइमत छैन् । सिके राउत वार्ता गरेर जाँदा खेरी नयाँ देश भनेर मधेशमा स्वागत गरियो त्यो के हो ? नेपालको कुनै भुभागबारे जनमत संग्रह हुन सक्दैन् । तराइ पहाड हिमालमा बस्ने सबै नेपाली हो । नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्छ । हामी विखण्डन मान्न सक्दैनौ ।”
उनले थपे, “कहाँ छ ओलीको राष्ट्रवाद ? महङ्गी बढ्या बढैछ । शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे बिगारिदैछ । सरकारी विद्यालयको स्तर बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राइभेट स्कुलभन्दा राम्रो विद्यार्थी सरकारीवाट उत्पादन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । विद्यार्थी ठग्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सेना प्रधानमन्त्रीको नोकर हो ? राष्ट्रको सेनालाई प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्ने ? ओलीले जताजतै हस्तक्षेप गरेको छ । अब ओलीबाट मुक्त गराउन आन्दोलन गर्न नपरोस् । ”
२०७५ चैत्र २९
कोरोना निको हुनेको संख्या १ लाख ८ हजार ३३४ पुग्यो